Posted by အင်ကြင်းသန့် at 11:28 PM
စိတ်ဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ ဂျင်းရယ် ... အသက်အရွယ်က စကားမပြောပါဘူး(တခြားအကြောင်းအရာတွေကို မဆိုလိုပါ) ... ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အနေအထား ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆိုင်တယ် ...
လူတစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့ စိတ်ဟာ ရှိကို ရှိနေရမယ် ...
အဲဒါကြောင့် ပြောကြတာပေါ့ လူ့စိတ်ဆိုတာ မျောက်စိတ်လိုပဲတဲ့ .. အဲ မျောက်စိတ်ကတော့ လူ့စိတ်နဲ့ သွားတူတယ်တဲ့ ...
အဟားဟား စဉ်းစားတာ ကြည့်တော့ ဂျင်းရေ ...
စာ ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း မှ ပဲ နင် ခုနောက် ပိုင်း ကလေးလေး အပေါ်မှာ ဂရုတစိုက်ရှိလာ တာတွေ မျက်လုံးထဲမှာ ပေါ်လာတယ်... အင်း... ကလေးလေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ငါ သတိရတာလေး ထည့်ပြောလိုက်အုန်းမယ်... ဒီအိမ်ကို ရောက်ပြီး ၄ ၅ လ လောက်ထိ မမတို့ ကိုကြီး တို့ ကလေးလေး ပါးနပ်ပုံ သိတတ်ပုံ တွေပြော တော့ သြော် ပိုတက်ရန်ကော လို့ ထင်ခဲ့တာ... တစ်နေ့ရောက်မှ မမ တို့ ပြောတာ သွေးထွက်အောင်မှန်နေပါလားလို့သိလိုက်ရတယ် လေ... အဲဒီနေ့ က မနက်အစောကြီး ကလေးလေး ရယ် အိပ်ခန်းပေါက်ဝမှာ တညောင်ညောင်နဲ့ အော်နေတာကို ကြားပေမယ့် ငါအိပ်ချင်စိတ် နဲ့ အတင်းနားပိတ်ပြီး အိပ်နေတယ်လေ... အယ်.. ခဏကြာတော့ အမယ် သူက အိပ်ခန်းတံခါးကို လက်သည်းနဲ့ ခြစ်ပါလေရောလား၊ ငါ လည်း စိတ်တိုတို နဲ့ ထပြီိးိအိပ်ခန်းတံခါးဖွင့် တော့ သူက အိမ်ရှေ့တံခါးနားကို ပြေးသွားပြီး ငါကို လည်းကြည့် တံခါးကို လည်းကြည့် ပြီး တညောင်ညောင်အော် တော့တာပဲ.. အဲဒီကျမှ ပဲ ငါလည်းသိတော့ တယ် တော်တော်လည်တဲ့ကြောင်... ငါတို့ အခန်းကို လာနှိုးပြီး သူ အပြင်ထွက်ချင်လို့ တံခါးဖွင့်ခိုင်းတာကိုးလို့..... ဒီထက်ပိုသိတာ က အဲဒီ နေ့က မမ က ညဂျူတီလေ ကိုကြီးကလဲ အလုပ်ထဲမှာ ပဲ အိပ်တော့ သူအပြင်ထွက်ဖို့ ကို မမတို့ အခန်းကို အားကိုးလို့ မရဖူး ငါတို့ကို နှိုး မှရမယ် ဆိုတာ ကို သူသိနေတာပဲ............ အင်ကြင်းရေ ကလေးလေးအကြောင်း ထည့်ပြောတာနဲ့ ငါ ကွန်မင့် ကရှည်သွားပြီ.. ဒီပို့စ်လေးက ရှည်ပေမယ့် စာကို အဆုံးအထိ ဆွဲခေါ်သွားတယ်... သိလား
အကြောင်းအရာတစ်ခုကို စိတ်ဝင်စားစဖွယ်ဖြစ်အောင် ရေးတတ်တယ်..
တကယ်ချီးကျူးပါတယ်.. ကြောင်တစ်ကောင်အကြောင်းတောင် ဒီလောက်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်အောင် ရေးနိုင်ရင်
လူတစ်ယောက်အကြောင်းများ ရေးထားခဲ့ရင် ဘယ်လောက် ပီပြင်မလဲလို့ တွေးကြည့်မိနေတယ်..း)
ဂျင်းရေ...ကလေးလေးနဲ့ ဂျင်းရဲ့ပုံစံလေးကို မြင်ယောင်ပြီး ကြည်နူးစရာလေးနော်..
ကလေးလေးပြန်လာလို့တော်သေးတယ်..မွန်လည်း ကြောင်မဲမဲတွေ ချစ်ဘူး..ခွေတော့ချစ်တယ်..
မမရေ... မောင်လေးဥာဏ်မမီလို့လားမသိ ကော်မန့်လို့မရဘူး... အဟင့်ဟင့်
ဒါပေမယ့်လေ... ဆိုရိုးစကားတစ်ခုတော့ရှိပါတယ် သူချစ်မှကိုကြင် သူခင်မှ ကိုချစ် တဲ့ မမရေ...
ဂျင်းရေ...ဖြစ်တတ်ပါတယ် ညီမရယ်...အမက ကြောင်မချစ်တတ်ဘူး...အနီးကပ်လည်း မနေခဲ့ရဘူး၊ ဟုတ်မှာပါ သက်မဲ့တွေ အပေါ်တောင် စွဲလန်းတတ်ကြသေးတာပဲ သက်ရှိကြောင်ဆိုတော့ သံယောဇဉ်တွယ်မှာပေါ့လေ....ဂျင်းရေးထားတာလေး သိတ်ဖတ်ကောင်းတာပဲ ငါ့ညီမလေး တော်ချက်များ...:)
You meet as predestined with them in this life.
Anyway your post be highly pleased us. thanks :)
ဂျင်းရေ........ စာရေးကောင်းလွန်းလို့ ကပ္ပလီမလေးကိုတောင် အသည်းယားလာတယ်။ ကလေးလေးကိုလည်း သနားသွားတယ်။ တခါတလေ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ သိတတ်နားလည်မှုဟာ တကယ်အံ့သြစရာ ကောင်းတယ်။ စာရေးတော်လို့ လေးစားသွားတယ်။း)
မိမိစိတ်ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာ ကောင်းတဲ့အချက် တစ်ခုပါ အင်ကြင်းရေ....အမှားကိုသိတော့ အမှန်ကို မြင်နိုင်တယ်။ အမှန်ကိုသိတော့ မှန်တာကို ကျင့်ကြံနိုင်တာပေါ့။ အရေးအဖွဲ့ လေးကနှစ်သက်စရာ ကောင်းပါ၏။ အားပေးနေလျှက်ပါ...ခင်တဲ့(ချိုကျ)
စာရေး ရေး ဆိုတော့ ရေးလိုက်ပါတယ်.. သူ့ကြောင်လေး အကြောင်းပါလား.. ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ညီမ အရေးကောင်းလို့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသွားပါတယ်
ညီမ ချစ်တဲ့ ကလေးလေး လည်း အမြန်ပြန်လာပါစေ
ညီမ မမ ကိုလည်း ပေးမပြောပါဘူးနော်
စိတ်ဝင်စားစွာဖတ်သွားပါတယ်၊ ကြောင်မချစ်တတ်သူထဲမှာပါပါတယ်၊ ကြောင်တယ်ကောင်ကို တနေကုန်ထိုင်ကြည့်ဘူးတယ်၊ ချစ်စရာ တစ်ကွက်မှ မတွေ့ရဘူး၊ အဲဒီ့ ကြောင်ကပဲ ကိုယ်ချစ်တတ်အောင် မနေလို့လားမသိဘူး။
ကျွန်တော်ကတော့ ကြောင်ကိုချစ်တယ် ဒါပေမယ့် အသံဆိုးကြီးနဲ့အော်တဲ့ကြောင်ဆိုမုန်းတယ်
ဒါပေမယ့်ခွေးကိုဘယ်ခွေးမဆိုမုန်းတယ် အသံကလည်းဆိုးသေး နံကလည်းနံသေး
ရေးမယ့်ရေးတော့လည်း တကယ့်ကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ဖတ်သူကို ဆွဲခေါ်သွားအောင် ရေးနိုင်တာပဲ ဂျင်ဂျင်းရေ။ မဇွန်က ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြောင်မချစ်တတ်ဘူး။ ခွေးကို ပိုချစ်တယ်။ ခုကြီးလာတော့ ဘယ်လိုဖြစ်တယ် မသိဘူး။ ခွေးတွေကို ကြောက်လာရော။ ဂျင်းဆီလာလည်ရင် ကလေးလေးကို တွေ့နိုင်တာပေါ့နော်။
ကိုလူထွေးကတော့ ကပ္ပလီမလေးအတွက်ပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတယ်...
@ဦးလူထွေး>>>ဦးလူထွေးရေ....ဦးလူထွေးရဲ့ အဲဒီစကားတစ်ခွန်းက ကျနော့်ကို တော်တော်ထိသွားစေတယ် ...ဟုတ်တယ်နော် တကယ်ဆိုရင် ကျနော်ဟာ အဲဒီကြောင်မလေးဘက်က ခံစားချက်ကို သူ့ဘက်ကနေ ခံစားတွေးပေးသင့်တာပေါ့...ခုတော့ ကျနော်က ဘက်လိုက်ပြီး မျှတစွာ မတွေးပေးခဲ့မိဘူး...
လူ့သဘာဝ တစ်ခုပါပဲ ပျော်ရွှင်တတ် ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့ ခံစားချက်တွေ ရှိသေးတဲ့ ပုထုဇဉ်အတွက် ဒီလို မျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
သံယောဇဉ်ဆိုတာမျိုးက သက်မဲ့မှာတောင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အခုက သံယောဇဉ် ဆိုတာရယ် အနိင်ကျင့်ခံရသလိုဖြစ်တဲ့ (အိမ်ထဲမဝင်ရဲတဲ့) ကြောင်ကလေး ဘက်ကနေ မခံနိင်တဲ့ လူသားဆန်မှု တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်ဆိုလည်း ဒီလိုမျိုး ဖြစ်နိင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ပြန်ဆင်ခြင် နိင်ပါ့မလားတော့ မသေချာဘူး။
ကိုယ်မှားတာလည်း ရှိနိင်ပေမယ့် ပြန်ဆင်ခြင် တတ်တာ တစ်ခုက တော်တော်ကောင်းနေပါပြီ။ သတ္တဝါတစ်ခု ကံတစ်ခုဆိုတာရယ် တွေ့ကြုံဆုံကွဲ ရယ်ကြောင့် အများကြီး တွေးပြီး စိတ်မကောင်းတော့ မဖြစ်ပါနဲ့လေ။
မိုးကတော့ ကြောင်တွေကို တကူးတက တော့မချစ်တတ်ဖူးဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အိမ်မှာ အမြဲလာနေတော့သံယောဇဉ်တော့ဖြစ်သွားမိတယ်လေ။
ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ပြီး ဂျင်ဂျင်းနဲ့ အတူ လိုက်တွေးမိစေတယ်။
ကဲ မအင်ကြင်း ရေ
ဘာရန်လုပ်မှာ လည်း ပြောပါအုန်း မနေနိုင်လို့ လာမေးပါတယ်နော်
ဖြေးဖြေးလည်း ပြောပါ everything is ok for u ပါ
ဒီပိုစ့်လေးဖတ်မိပြီး ခံစားမိသလို ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ၊ကြည်နူးဖွယ်ရာလေးတွေလည်း ရပါတယ်။
သိချင်လို့ မေးကြည့်တာ စိတ်အကြောင်း၊ ရုပ်အကြောင်းတွေ လေ့လာပြီး ပြန်လာပါတယ်
ရပါတယ် စိတ်သဘောအကြောင်းကိုပဲ ထပ်လေ့လာရပြန်ပါတယ် တရားမရနိုင်သေးတော့ စိတ်အကြောင်းများ ထပ်ရှာဖွေသွားပါတယ်
မျက်နှာချင်းဆိုင်ကလူက သူရှိုးနေတာမကျေနပ်လို့ တမင်လုပ်တယ် ထင်မသွားဘူးလားဗျ...
ရွှေပြည်မှာကလည်းဆွဲတဲ့လိုင်းကားက အဲလိုကားလေးတွေကိုး... ဒီမှာကတော့ အဲလိုကားမျိုးတွေ့ကိုမတွေ့ရတာ။ ရှိလည်း ဆွဲမှာမဟုတ်ပါဘူး...
အစ်မ အင်ဂျင်း အချိန်မရလို.နောက်နေ.မှ သေချာလာဖတ်မယ်နော်... အင်တာနက်မရလို. မလာဖြစ်တာခွင်.လွတ်ပါအစ်မရေ..ပျော်ရွင်ပါစေ..